आमाको आँखामा आँसु (गजल)
By नवीन सन्देश on	 ११ भाद्र २०७३, शनिबार १३:५८ · साहित्य
(नवराज बुढा ‘नवीन उदासी’)
आमाको आँखामा आँसु, झारिन्छन कतिञ्जेल ?
बिदेशमा नेपालीहरू सधै, मारिन्छन कतिञ्जेल ?
पलायन रोकिएन स्वदेशमै रोजगारी भएन भने,
दलालीबाट अँझै अलपत्र, पारिन्छन कतिञ्जेल ?
पैसाको मुठा हुन्छ भनी, राम्रो कमाई हुन्छ भनी,
चेलिबेटिलाई समुद्रापारी, तारिन्छन कतिञ्जेल ?
गाउँघर सबै शुन्य बनाई युवा जति मुग्लान तिर,
विवशतावले युवाशक्तिहरू, सारिन्छन कतिञ्जेल?
बिना कामका पार्टी नेताहरू सोचिएन भने बेलैमा,
विकासको बाटोमा अँझैपछि, हारिन्छन कतिञ्जेल ?